Doorashada Somaliland: Xubno katirsan Waddani oo la xiray
Faadumo iyo Xamse, oo xubnaha laga xiray Waddani
HARGEYSA, Somaliland - Ciidamada Somaliland ayaa lagu soo waramayaa inay xireen dhowr xubnood oo kamid ah Xisbiga mucaaradka Waddani, xilli ay socoto wareegga labaada ee tirinta codadka doorashadda.
Mas'uul katirsan Korjoogiyaasha doorashada ayaa Warsidaha Garowe Online u xaqiijiyay xariga xubnaha Waddani, kuwaasi oo kala ah Xamse Khayre, Madaxii Ololaha Doorashada Waddani, Faadumo Saciid, oo la taliye dhinaca dibadda u ah Cirro iyo nin kale oo lagu magacaabo Ismaaciil Yare.
Xamse waxaa la sheegay in la xiray kadib markii lagu eedeeyay inuu bixiyay lacag laaluush ah, halka Faadumo iyana ay faragelisay arrimaha doorashada, una dhaqantay sida qof korjooge ah.
Faadumo Siciid ayay booliisku sheegeen in laga xiray goob ay ka socotay tirinta doorashada oo Dugsi ahayd xalay fiidkii, sidoo kale Xamse Khayre ayaa maanta lagu xiray magaalada Gabiley.
Wararka ayaa sheegaya in marki dambe lasoo daayay Faaduumo, iyadoo xisbiga Waddani aan wali ka hadlay xarigeeda iyo kuwa kale, balse waxay ku eedeeyeen Booliska inay jirdileen Ismaaciil Yare.
Meesha uu xariga xubanaha ka dhacay waa Labo goobood oo codbixin ah oo ku yaalla magaalada Hargeysa, sida uu GO u sheegay qof kamid ah Korjoogiyaasha, oo magaciisa ka gaabsaday.
Gudiga Doorashada Somaliland ayaa waxa uu sheegay in aysan waxba ka galin shaqsi ay xireen ciidamada amniga, islamarkaana ay shaqadooda ahayn arrimaha noocaas ah inay farageliyaan.
Tani ayaa kusoo aadaysa xilli Gudiga Doorashada uu ku guda jiro wareeggii labaad, ee tirinta codadka doorashadii dhacday 13-ka Nov, taasi oo ay ku tartameen Musharaxiinta Waddani, Kulmiye iyo UCID, waxaana lagu wadaa in natiijada lagu dhawaaqo maalinta khamiista ee soo socota.
Digniin loo jeediyay Musharaxiinta Somaliland [Dhageyso]
Soomaliya 16.11.2017. 11:22
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland ayaa u digtay Musharaxiinta doorashada Somaliland...
Wufuud caalami ah oo ka qeybgalaysa caleema-saarka Muuse Biixi
Somaliland 12.12.2017. 22:55
Somaliland 28.11.2017. 16:37
Trump oo baaq kasoo saarey dadka Covid-19 ugu dhimanaya Mareykanka 30.03.2020. 15:56